Britney Spears, mpilalao sarimihetsika, mpihira
Britney Spears, anarana fenoBritney Jean Spears(* 2. 1981 Desambra McComb, Mississippi, Etazonia) dia mpihira pop amerikana, nandresy ny Grammy sy MTV Video Music Awards, mpamoron-kira sy ny mpilalao sarimihetsika. Tena lasa fantatra amin'ny hira "... Baby One More Time", "Oops! ... nataoko azy indray", "Manapoizina", "Gimme More," "mpanenjika vehivavy," "tapa-Ahy", "Mangina amiko izany" "Ambara Eran-tany vazan", fampiantranoana ilay hira "niantsoantso & Manakorà" mpanao rap Amerikana Will.i.am sy mihira feonkira amin'ny sarimihetsika ny Smurfs 2.
Nanomboka tamin'ny fahitalavitra tao amin'ny New Mickey Mouse Club izy fony mbola tovolahy, dimy taona taorian'ity fampisehoana ity tao amin'ny 1998, nandeha tamina karazana solo mihira izy.
Ny zava-bita no Nahasarika mpanohana sy ny dokam-barotra, no tsara indrindra fantatra amin'ny Pepsi dokam-barotra, dia namokatra ny sarimihetsika Crossroads ary nanana zava-misy fampisehoana Britney & Kevin: mikorontana. Nandritra ny efa-taona dia niaraka tamin'ny mpihira Justin Timberlake izy. Tamin'ny taona 2004 nanambady izy Kevin Federline mpandihy, izay, telo taona tatỳ aoriana, ary izay nisara-panambadiana izy roa lahy, Sean Preston sy Jayden James (2005, 2006). Tamin'ny volana Janoary 2013 nisaraka amin'ny fofombadiko Trawick Jason, fa rehefa afaka iray volana nanomboka niseho imasom-bahoaka miaraka amin'ny ankizilahy vaovao, tokony ho 4 taona tanora kokoa noho David Lucado. Tamin'ny faran'ny volana Desambra 2013 daka eny ny roa-taona any Las Vegas andraikitra.
Teraka tao McComb, Mississippi izy saingy lehibe tao Kentwood, Lousiana. Ny rain'i James Parnell Spears, no mpanorina sy reny Lynne Irene Bridges, mpampianatra amin'ny sekoly ambaratonga fototra. Manan-jaza roa izy, rahalahy Bryan (teraka 1977), izay miasa amin'ny iray amin'ireo mpitantana azy, ary rahavaviny Jamie Lynn (teraka 1991).
Nifaninana tamin'ny gymnastics izy, nahazo fifaninanana maro samihafa. Niasa tao amin'ny fampisehoana dihy teo an-toerana izy. Rehefa feno valo taona izy dia nanoro hevitra azy ny mompera iray ao amin'ny fiangonana batista ao an-toerana mba hihaino ny Mickey Mouse Club. Na dia mbola kely aza izy, dia nahita mpitsabo iray tao New York. Avy eo dia nanatrika sekoly dihy tany New York izy ary niasa tamin'ny fahitalavitra tamin'ny dokam-barotra tsy ara-barotra.
Taty aoriana dia navotsotra tao amin'ny Mickey Mouse Club izy ary niasa tao amin'ny 1993-1994. Nihaona tamin'ny artista hafa toa an'i Justin Timberlake, Joshua Chasez, Keri Russell, Christina Aguilera, na Ryan Gosling.
1997-2000 Mpikarakara nanomboka: fifanarahana amin'ny rakitsoratra Jive, ...Ankizy bebe kokoanyOops ...! Niverina indray aho
Ao amin'ny 1997 Britney izy sonia ny fifanarahana amin'ny Jive Records taorian'ny fihetsiketsehana nihaino ny rakotra fanaovam-panavotana ny hira "Ho tia anao foana," tany am-boalohany Whitney Houston hirain'ny izay naniraka azy. Rehefa sonia fifanarahana miaraka amin'ny Britney tsikelikely izy vao hiomana amin'ny fandraisam-peo Albums sy hanitatra ny feo isan-karazany peo mpanazatra. Mandritra izany fotoana izany ao fihetsiketsehana maro taty aoriana lalany izay navoaka tao amin'ny CD mpitovo na Album ... Oops! ... nataoko indray. Début single lasa hira antsoina hoe..., izay nanomboka niseho tao amin'ny onjam-peo ary tao amin'ny MTV tao 1998. Mbola fotsy hoditra izy ary nanao akanjo fanamafisana. Nahomby ny hira manerana izao tontolo izao. Ny sarin'ireo takelaka dia nonina tany Etazonia, fa tany Aostralia sy Angletera ihany koa. Ny anaran'ilay rakitra tamin'izany dia tao Kanada sy Etazonia teo an-tampon'ny horonan-tsarety nandritra ny enim-bolana. Tao anatin'ny herintaona dia lasa zatovo nahomby indrindra teo amin'ny tantara izy. Alba...dia namidy eran-tany tamin'ny alalan'ny 35 tapitrisa tapitrisa.
Tamin'ny volana Aprily, dia nahatratra ny pejy voalohan'ilay gazety ny 1999Vato mikodiadia.Sary izay nanolotra ny tenany ho toy Lolita, tezitra tabataba, satria azy Toa nanana nono lehibe noho ny hafa sary, izay swarmed sahoan-dresaka mikasika ny voalaza fa plastika fandidiana tsy maintsy maintsy alohan'ny filming ny sarimihetsikaIndraindray. Tsy voamarina ireo tomban'ezaka ireo.
Ho an'ny rakikira...Nahazo mari-pankasitrahana maro izy ary tao anatin'ny fitsapan-kevitraLisitry ny mozika amin'ny baolina kitra 1999mpanakanto voafidy tamin'ny taona.Tamin'ny volana Desambra, nahazo ny loka Bill Music izy, ny American Music Award, ary farany fa tsy ny kely indrindra, nahazo valisoa Grammy roa ny 2000 tamin'ny Febroary.
Taorian'ny famitana ilay fitsidihana antsoinaCrazy 2K Tournamoaka CD faharoa mitondra ny lohatenyOops! ... efa nanao izany indray ahoTonga teo an-tampon'ireo takelaka avy hatrany izy na aiza na aiza manerana izao tontolo izao. Tamin'ny herinandro voalohany tany Etazonia, dia namidy mihoatra noho ny 1,3 tapitrisa ny rakipahalalana, ary nanjary ny fivarotana haingam-pandeha indrindra amin'ny mpihira amin'ny fotoana rehetra.Nandritra ny taona, 2000 dia nivarotra tontalin'ny 10 tapitrisa tany Etazonia, mpandraharaha 900 000 tany UK, ary ny iray tapitrisa tany Alemaina 1,2. AlbaOops! ... efa nanao izany indray ahodia namidy eran-tany tamin'ny alalan'ny tarika 24 tapitrisa.
Tao 2000, izy sy ny reniny dia namoaka ny boky voalohany, izay navoaka teo ambanin'ny lohatenyAvy amin'ny fo am-po. Nahazo mari-pankasitrahana MTV maromaro izy, ary nanomboka nanadihady momba ny asany izy, izay vao avy nakanjoany.Teo ambin'ny rakikira faharoa dia nahazo fahazoan-dàlana Grammy roa izy tao amin'ny Best Pop Albums sy Best Pop Songs.
2001-2003Britney, Crossroads aAo amin'ny Zone
Nitsentsitra ahy ny Mozika Britney Spears (NFL Kickoff Live 2003)
Tamin'ny fiandohan'ny taona 2001 nanao sonia ny fifanarahana amin'ny Pepsi dokam-barotra, fa izay nahazo 8 izy tapitrisa dolara.Namoaka ny boky faharoa izy mitondra ny lohatenyNy fanomezan'ny renyary liana indray tamin'ny fampisehoana nataony tamin'ny MTV Video Music Awards izy, nihira vilany iray, izay nitsikera ny PETA.
Tamin'ny volana Novambra, namoaka ny rakikirany fahatelo izy, niantso fotsinyBritney. Nandritra ny herinandro voalohany, namidy mihoatra noho ny 746 000 izy.Na dia mihoatra noho ny 4 tapitrisa ny fivarotana tany Etazonia, dia goavana goavana izany raha oharina amin'ireo boaty roa voalohany.Ny rakikira no voalohany no sady mpanoratra no mpamokatra.Albenina eran-tanyBritneyNamidy tapitrisa 15 tapitrisa.
Tamin'ny volana febroary 2002 dia nandeha tany amin'ny sarimihetsika voalohany izay nilalao, nantsoinaCrossroads, izay tamin'ny faran'ny herinandro voalohany taorian'ny nametrahana ny fanatrehana faharoa, saingy nidina haingana be. Ao anatin'ilay sarimihetsika dia nisy ny hira avy amin'ny rakikiraBritney. Tamin'ny farany, nitsikera ireo mpitsikera ilay horonantsary, ary nandray ny Golden Raspberry mihitsy aza ho an'ilay mpilalao sarimihetsika ratsy indrindra niaraka tamin'i Madonna. Ilay horonantsary koa dia nandresy ny fanolanana Golden noho ilay hira ratsy indrindra ho an'ny horonantsary,Tsy Vehivavy Aho, Fa Tsy Vehivavy, izay azony.
Ny fifandraisana efa-taona tamin'i Justin Timberlake dia nifarana tamin'ny 2002 tamin'ny Martsa. Niely be ny fizarazarana ary matetika izy no voampanga ho lazaina fa nivadika.Nipoitra ny fisainana rehefa namoaka hira iray i TimberlakeCry me and River, izay mihira momba ny tsy fitovian'ny namany. Spears naneho hevitra hoe:"Efa roa taona ny fifandraisana, azoko antoka fa Izy no tena izy, saingy diso aho."
Tamin'ny Jona, 2002 dia nanokatra trano fisakafoanana NYLA any New York, saingy nanidy azy io rehefa tsy nahomby ny taona. Na dia nilaza aza ny mpitsikera sasany fa nihena ny fiantraikany amin'ny tontolo mozika, dia rakikira izyBritneyvoatendry ho an'ny loka Grammy. Ary ny taona 2003 dia nambara tamin'ny gazetibokyForbesolo-malazan'ny taona.Tao amin'ny sehatry ny mozika dia niverina tao amin'ny 2003 i XNUMX tamin'ny volana aogositra noho ny MTV Video Music Awards, izay niarahany tamin'ny sariny Madonna sy Christina Aguilera. Miaraka amin'i Aguilera, hitan'i Madonna malazaTahaka ny virjina. Nipoitra avy amin'ny famoretana ny fampisehoana, raha nanoroka an'i Madonna niaraka taminy izy.
Tamin'ny volana novambra, namoaka ny rakikirany studio faharoa antsoina 2003Ao amin'ny Zone. Max Max dia nanampy tamin'ny alalan'ny rakikira nandritra ny fotoana lava, saingy nampian'ny olo-malaza tahaka an'i Moby na R. Kelly ihany koa. Ny album manontolo (13 Songs) manontolo dia nosoratana voalohany. Ny album indray dia teo an-tampon'ilay sarimihetsika amerikana, ny fanoratana tantara an-kira - ireo alisetra voalohany.Tamin'ny herinandro voalohany, ny fivarotana 609 000 dia namidy, maherin'ny mihoatra ny 3 tapitrisa mivarotra any Etazonia. Taorian'ny fotoana lava dia nanana mpihira Top 10 tao amin'ny sarimihetsika Amerikana izy, hira iray antsoina hoe Toxic, izay nahazoany ny loka Grammy voalohany ihany koa.AlbaAo amin'ny ZoneManeran-tany dia namidy mihoatra ny 10 tapitrisa tapitrisa.
Ny singa fahatelo amin'ny rakikira dia nahomby ihany koaAo amin'ny faritramiaraka amin'ny anaranaisaky. Taorian'ny famoahana ity hira ity dia nandeha tany amin'ny fitsidihana maneran-tany antsoina izyNy Onyx Hotel Tour, izay nahita mpankafy 600 000 ary nahazo vola 34 tapitrisa. Ireo fampisehoana dia natao tany Amerika Avaratra ary tany Eoropa ihany koa, izay tsy nahavitany azy, satria naratra nandritra ny herinandro ny lohaliny talohan'ny fanombohan'ny fitsangatsanganana nandritra ny fitifirana horonantsary mihiramanafintohina.
3. Ny volana Janoary 2004 dia nanambady an'i Jason Allan Alexander namany. Ny fampakaram-bady dia natao tao amin'ny trano fiangonana kely iray tao Las Vegas. Nanao akanjo jeans sy basika izy. Tamin'ny fanentanana ny fianakaviany sy ny mpitantana azy dia ny fanambadiana 5. Nofoanana ny volana Janoary. Naharitra ora 55 izany. Tao amin'ny fangatahana fanitsakitsahana, nilaza izy fa tsy nahatsapa ny maha-zava-dehibe ny toe-draharaha izy ary vazivazy fotsiny no niampita ny fetra. Tsy manana fialam-boly iombonana miaraka amin'i Alexandre izy, ary tsy afaka mieritreritra ny hizara tokantrano izy na hanan-janaka. Farany dia nilaza izy tao amin'ny fahitalavitra iray:"Marina tokoa fa tiako ho fantatra hoe inona no manambady."
Tamin'ny jolay, 2004 dia nanambara ny fifandraisana amin'ny mpandihy Kevin Federlin telo volana taorian'ny nahafantarana ny klioban'ny Hollywood iray. Tsy nahafantatra ny fahatakarany izy hatramin'ny nanoloran'i Federline ny fanambadiana tamin'ny mpilalao sarimihetsika Shar Jackson ary nanana zanaka roa niaraka taminy izy. Na izany aza, miaraka amin'i Federlin amin'ny alina 18. Nivoaka ny 2004 tamin'ny Septambra.
2004-2006 Fanambadiana, ankizy voalohany arySafidy tsara indrindra
Tamin'ny tapany faharoa tamin'ny taona dia nanambara ny fanodikodinam-pihetseham-po mozika i 2004 noho ny reny.Taorian'ilay fanambadiana niaraka tamin'i Federlin, dia nilaza tamin'ny gazety izyPeople "Te ho reny tanora aho, amin'ny taona ho avy dia ho 23 ary te ho reniko aho."Na izany aza, ny orinasa nitondra ny anarana hoe "Britney" dia nandroso ary tamin'ny volana septambra 2004 dia namoaka ny zava-manitra voalony Curious. Taorian'ny herintaona nivarotana, nahazo vola an-tapitrisa dolara i 100 ary nanjary mpivaro-tena tsara indrindra.
Famoriam-bola voalohany notsongainaFihetseham-po lehibe indrindra: Ny fanatrehanaonivoaka tamin'ny faran'ny taona 2004. Ny album dia nipoitra tamin'ny toerana fahefatra tao amin'ny lisitry ny album amerikana (mety ho noho ny tsy fisian'ny fampiroboroboana ny varotra ambany).Tamin'ny herinandro voalohany, ny albums tao Etazonia dia namidy mihoatra ny 255 000. Tany Royaume-Uni, 115 000 dia namidy tamin'ny herinandro voalohany, nihoatra ny fivarotana tahiry mitovy toy ny Madonna, Shania Twain, na Whitney Houston. Nisy singa vaovao telo niseho tao amin'ny fifantenana, ankoatra ny hafaMy PrerogativenyManao Somethin '. Ny albums dia namidy eran-tany tamin'ny 8 tapitrisa tapitrisa.
Nandritra ny 2005, nanao ny asany tamin'ny vadiny izyBritney & Kevin: Chaotic. Ny mpitsikera anefa dia nanapaka ny tsy fahampian-tsainy, ary ny mpijery dia tsy niandry.
Ny herisetra voalaza tamin'ny alàlan'ny mpitondrateniny tamin'ny volana 2005,Tamin'ity volana ity izy dia nalain'ny hopitaly. Niresaka tamin'ny gazety izy tatỳ aorianaPeople:"Nandohalika kely aho, tsy maintsy nambenana tsy tapaka aho."Na dia mazoto aza izy, dia nandefa gazety iray hafa ilay zazaElle "Handeha any amin'ny fizarana Caesareana aho, tsy fantatro ny antony, fa noho ny tahotra ny fanaintainana."14. Septambra 2005 sy Sean Preston zanany lahy dia teraka tany Federlin. Ny fiterahana dia tokony hihazakazaka mandra-pahatongan'ny ampitson'iny, fa ny fahatongavana dia tonga aloha kokoa. Ny vadiny dia nitazona ny tanany nandritra ny asany. Taty aoriana dia nafindra tao amin'ny paroasiterin'ny paroasy tao Santa Monica izy.
Taorian'ny nahaterahan'ny zaza voalohany, dia tsy vaovao be ny asany. Ny famoahana azy dia namoaka rakikira an-tariby nantsoinaB ao amin'ny Mix: The Remixesary tamin'ny Febroary 2006 dia namoaka zava-manitra vaovao antsoina hoe In Control.
Tamin'ny May 2006 nanambara faharoa vohoka, dia niteny ampahibemaso momba ny tombantombana momba ny firodanan'ny akaiky ny fampakaram-bady, izay nandà, ary nanamafy ihany koa ny vaovao fa album, mpankafy ihany koa hahita ny voalohany nandritra ny herintaona.12. Septambra 2006 dia teraka tamin'ny zanany lahy faharoa, Jayden James. Latsaky ny roa volana taorian'ny nahaterahany, nangataka fisaraham-panambadiana izy noho ny fahasamihafan'ny tarehin-tsoratra tsy azo ihoarana ary tamin'izany fotoana izany dia nangataka ny fitànana ny zanaka lahy.
Fisaraham-panambadiana 2006-2007 aBlackout
26. 2007, ny nenitoany, Sandra Bridges Covington, dia maty noho ny homamiadana.16. Taorian'ny herinandro vitsy taorian'ny fanenjehan'ny paparazzi dia nanapa-kevitra ny hanaraka fitsaboana miankin-doha amin'ny fialana aina ny antoko wild sy ny fisotroana toaka. Ny ora 24 dia tsy naharitra na dia tao amin'ny hopitaly azaary ny alina taorian'izany dia niseho tao amin'ny salon kanto iray tao Malibu, izay tsy nety nanaratra ny volony. Izany no nahatonga azy haka ny hodi-jaza ka nanapaka ny tenany. Avy eo dia nandeha nivantana tany amin'ny tattoo studio izy izay nahitana tatoazy. Hoy ny Vavolombelona:"Aza manendry ahy. Manana izay rehetra mikasika ahy manodidina ahy aho. "Ny volon'izy ireo, miaraka amin'ny Red Bull tsy nahita fianarana, ny lanjany sy ny fanasan-damba nopotehiny, dia niseho tao amin'ny aterineto ho an'ny fivarotana.
20. Tamin'ny volana Febroary, nanapa-kevitra i 2007 fa hiverina amin'ny fitsaboana ary nangataka mpanao gazety ampahibemaso handao azy irery sy hanaja ny tsiambaratelo. Tsy nitranga izany ary rehefa nahita ny toeram-ponenany ny paparazzi, dia nanapa-kevitra ny hampiato ny fitsaboana indray izy. Tsy naharitra andro iray tao amin'ny hopitaly izy.
21. Febroary, 2007, dia natolotra an'i Kevin Federlin ireo zaza roa ireo. Io alina io dia niseho teo anoloan'ny tranony izy ary nanontany ireo ankizy. Tsy nanokatra azy ny vadiny taloha. Rehefa nahita ilay mpanao gazety nanenjika azy izy dia nanafika azy ireo tamin'ny elo.Izany no fanintelony nahitana ny fitsaboana, ary i Kevin Federline dia noraisin'ny fitsarana iray am-polony ny ankizy. Ny mpitsara izay niandraikitra ny fisaraham-panambadiana dia naheno fa raha tsy nahafeno ny fitsaboana tamin'ity indray mitoraka ity sy ny toby fanarenana indray izy dia tsy hanana fanantenana ny hiteraka ny fisaraham-panambadiana. Ny klioba dia namela 20 taorian'ny fitsaboana nahomby. March 2007, ary nanomboka nanokana ny ankizy ary nanomana indray ilay rakikira vaovao.
Tamin'ny volana Septambra dia nanomboka ady ara-dalàna ny 2007 mba hiarovana ireo zanakalahin'i Sean Preston sy Jayden James. Nandidy azy ny fitsarana mba handalo fitsapana sy fanafody isan-kerinandro.Andro vitsy taty aoriana izy dia voampanga ho nitondra fiara tsy misy fahazoan-dalana mpamily ary nandrahona azy am-ponja.Noho izany tranga izany dia nomena fiarovana feno i Kevin Federline, ary ny iray monja isan-kerinandro ihany no navela, teo ambany fanaraha-maso.
Efa ho telo taona taty aoriana, dia niverina tamin'ny sehatra izy, ny voalohany dia lasa 1. Avia ry 2007 ao amin'ny House of Blues ao San Diego arahan'ireo fijery dimy hafa any amin'ny tanàna hafa. Ny zavatra rehetra dia novolavola tao anatin'ny minitra vitsy.31. Tamin'ny volana Aogositra, nisy olona iray navotsotraGimme Moreary ny fahitalavitra mozikaMTVdia nanambara androany fa hanomboka ny MTV Video Music Awards io singa io. Mandritra ny fampisehoana azy dia ao anatin'ny firaiketany izyGimme Moredia nanapaka ny volony ary voatery nanao ny fampisehoana rehetra niaraka tamin'ny voditongotra. Nitsikera ny tsikera ny mpitsikera rehefa nihira tamin'ny playback izy ary saika tsy nandihy. Taorian'izay anefa dia nanambara izy fa voatery nandao ny orinasan-tserasera Jive, na dia tsy mahatsiaro ho vonona tanteraka amin'ny fiverenany aza izy. Jive Records dia nampanantena ny MTV fa tsy ho fantany izany fotoana izany. Ity fampahalalam-baovao ity dia navoakan'i Britney P. Diddy teo aloha talohan'ny VMA.
Nasehony koa ny fampisehoana hafa niaraka tamin'i Chris Angeel mpanao majika malaza. Eo amin'ny sehatra, tokony hiseho izy ary hanjavona na handihy amin'ny alalan'ny fitaratra. Andro vitsy mialoha ny fampisehoana, na izany aza, tonga ny MTV ary ny hotely Palms mihitsy, izay nahitana ny fampisehoana, dia nampidi-doza loatra ilay isa, ary tsy maintsy niova ny fandaharana nandritra ny minitra farany noho ny fiantohana.
Album vaovao eo ambanin'ny lohatenyBlackoutnamoaka 30. Oktobraary ireo mpitsikera dia nihaona tamin'ny fahombiazana tsy nampoizina, saingy tsy nampiroborobo ilay rakikira izy ary nandevina azy. Saingy tamin'ny volana Desambra dia namoaka horonantsary lahatsary tsy nampoizina ny 2007Ny ahy, izay teo anoloan'ny sehatra.
2008-2010:Circus,Ho an'ny firaketanaary fitsangantsangananaNy Circus Starring: Britney Spears
Britney spears on the Circus Nandresy: Britney Spears tao amin'ny 2009
Tamin'ny Janoary, 2008 dia nampidirina hopitaly noho ny toe-piainana ara-psikolojika rehefa nitazona ny zanany lahy tao an-tranony izy ary nandà tsy hanome azy ny vadiny taloha.Na izany aza, ny hopitaly dia nandao ny hopitaly taorian'ny andro vitsivitsy mba hiverina aminy tamin'ny volana febroary.Avy eo dia nandidy ny fitànana an-tranomaizina an'i Jamie Spears rainy ny tribonaly.
Na izany aza, rehefa niverina avy tany amin'ny hopitaly, dia nisy fiatoana nitranga. Nesoriny ilay mpitantana ary niverina tany amin'ilay tomponandraikitra voalohany, Larry Rudolph, izay nitarika ny lohany folo taona lasa izay. Tamin'ny volana Martsa, 2008 dia nanambara ampahibemaso fa hanao laharam-boninahitra amin'ny andiany Amerikana mahomby izy ioAhoana no nihaonako ny reninao?. Ny tantara dia nanjary indrindra-nijery fandaharana mandrakizay, ary nahazo ny ambony indrindra teo amin'ny tantaran'ny ampy ny andian-dahatsoratra.Noho izany dia nanomboka niresaka momba Spears indray aho tamin'ity sitcom nahomby ity. Nandritra izany fotoana izany dia nisy clip iray nalaina sary an-tsehatra tonga nanolo-tenaAtsaharo ny gilasy.
12. Miangavy indray i 2008Ahoana no nihaonako ny reninao?ary araka ny mpamorona ny andian-tantara dia azo atao ny milalao amin'ny vanim-potoana vaovao koa.7. September 2008 namoaka ny loka 2008 MTV Video Music fanintelony. Nahazo loka ho an'ny vehivavy tsara indrindra, video tsara indrindra sy lahatsary amin'ny taona ho an'ny horonantsary hiraNy ahy. Ny fanadihadiana dia nanomboka nitifitra tamin'io andro io ihanyBritney: Ho an'ny firaketana, izay naveriny tamin'ny zava-nitranga teo amin'ny fiainany manokana.Natao tamin'ny 30 ilay rakitra. Ny 2008 amin'ny MTV sy 5,6 dia nijery mpijery an-tapitrisany. Ilay horonantsary fanadihadiana izay manala azy ao amin'ny tontolon'ny mpandinika sy ny any ivelany. Amin'ity antontan-kevitra ity dia hianatra ny heviny momba ny ambany sy ny antoko, ary na mieritreritra ny ho vonona ny hijoro eo amin'ny sehatra eo anoloan'ny olona an-tapitrisa. Ny horonantsary dia tsy miresaka afa-tsy azy, fa koa amin'ny fianakaviany, ny mpitantana ary ny mpiara-miasa aminy.
Ny rakitsary studio fahenina nataonyCircusnivoaka tamin'ny volana desambra 2008. Vilia taorian'ny famoahana niakatra ho any an-tampon'ny Etazonia varotra sary dia tonga ny mpanakanto zandriny indrindra mba Début dimy takelaka amin'ny laharana voalohany ka nahazo noho ny hanoratra ny boky fitadidiana Guinness.Ilay mpihira-songwriter Womanizer, izay nandresy ny endriky ny tabilao Amerikanina, no lasa voalohany tao amin'ny asany nanomboka tamin'ny laharana voalohany ... Baby One More Time avy amin'ny 1999. Tamin'io taona io izy dia nomena ny loka ho an'ny fiverenana lehibe indrindra sy ny fiverenany amin'ny tantara noho ny fiainany sy ny asany. Tamin'ny fisaraham-panambadiana, ny fahaverezan'ny fikarakarana ny zanany, ary ny fisarahana ara-pihetseham-po, dia nampiseho ny heriny mahagaga tamin'ny fiverenany izy. Tamin'ny volana june 2009, ny rainy dia nahazo didy navoakan'ny filoha teo aloha, Sami Luftim, Adnan Ghalib, ary ny mpisolovava Jon Eardley, mba hanatona azy sy ny fianakaviany akaiky kokoa noho ny 250 yards.Tamin'ny volana Martsa 2009 dia nandeha fiara manerantany antsoinaNy Circus Starring: Britney Spears, izay nahazo dolara an-tapitrisany amin'ny vola miditra 131 ary efa nanjary ny fahombiazany indrindra, be mpitsidika indrindra sy tena mahasoa indrindra. Tamin'ny fotoana namoahana azy, dia 5 izany. Ny fitsidihana goavana indrindra nataon'i 2009, 5. ny fitsangatsanganana tantara be indrindra teo amin'ny mpihira sy ny 18. ny mahasoa indrindra. Ho an'ny fahombiazan'ny fahombiazana, ny orijin-tsehatra voalohany niavian'ny fampisehoana izay nahitana ny fampisehoana dia mihoatra ny avo roa heny amin'ny 97. Nandritra ny fizahan-tany 50 dia nosoloin'ireo mpandihy, mpikaroka, akanjo ary akrobats. Ny seho 200 rehetra dia natrehin'ny mpiasan'ny 50. Ny totalin'ny fifanintsanana 60 dia vola an-tapitrisa dolara amerikana. Ny fitaovana ho an'ny fampisehoana tsirairay dia ny 34 tonnes fitaovana izay nitondra ny kamiaon'ny XNUMX.
Tamin'ny volana Novambra, namoaka ny rakikirany faharoa amin'ny hetsi-panoherana goavambe izay nialoha ny tokan-tena i 20093, izay nanjary ny laharam-pahefany faharoa tao amin'ny Billboard Hot 100.Tamin'ny volana May, 2010 nanamafy ny fifandraisany tamin'i Jason Trawick, mpiara-miasa aminy, izay nanaiky ny hamaranana ny fiaraha-miasa amin'ny fiaraha-miasa, amin'ny ezaka hifantohana amin'ny fiainany manokana.Tamin'io taona io ihany, ny mpihira dia namoaka ny fanangonana fitafiana voalohany, miaraka amin'ny marika Candie.
28. Ny septambra 2010 dia nandefa ny andian-tantara Fox Stationhafaliany, izay nilalao ny tenany ihany koa. tantaraBritney / Bretagne, izay fanomezam-boninahitra azy, dia nanjary 13,3 niaraka tamin'ny mpijery an-tapitrisany ary ny 4% dia manamarika ny andiam-pijery navoakan'ny andian-tantara manontolo.
2011-2012: EraFemme Fataleary mpitsara ao amin'ny American X-Factor
28. Ny March 2011 dia namoaka rakikira vaovao, tamin'ny laharana fahafito. Nantsoina izy ioFemme fatale. Lasa hira ilay hira avy ao anaty rakikiraTohizo izy io.
Nifindra avy hatrany ny hira voalohany tany Kanada, Belzika, Danemarka, Nouvelle Zélande, ary ny sarin'ny Billboard. Ity no tokany fahefatra, izay nalaina avy hatrany tao amin'ny tabilao ary noho izany dia nanjary mpanakanto faharoa teo amin'ny tantara izay nahavita ny singam-pitaovam-pilônina imbetsaka tao amin'ny tabilao. Ilay mpanakanto voalohany dia mpiara-miasa amin'i Mariah Carey. Ao amin'ny horonantsary horonantsarin'ilay hira, milalao kintana iray avy amin'ny tontolon'ny onjampeo eto an-tany dia milalao mba hahita ny voninahitra. Ho lasa olo-malaza izy, saingy ny alahelony dia handresy sy handrava azy.
Nahafinaritra azy ny fiderana manerantany. Araka ny hevitry ny mpitsidika ny tranokalan'ny MTV, misy ny Album MartsaFemme Fataleny tsara indrindra amin'ny taona 2011.Vato mikodiadia, iray amin'ireo gazetiboky mozika malaza sy manan-danja indrindra, dia nanonona ny rakikirany ho toy ny rakitsary tsara indrindra hatreto ary nomena ny valin'ny 4 / 5, izay tsara indrindra indrindra azony avy amin'ity gazety ity. BritishDigital Spydia nanome ny rakitra na 5 / 5 ihany koa, izay, toy ny teo aloha, no nahazo ny tsara indrindra tamin'ny alàlan'ny album Britney. Ny album ihany koa dia mankalaza ny gazety japoney britanikaNy masoandroary na diaPerez Hilton. Ny rakikiran'ny rakikira dia taty aoriana (2013) nentanin'i Christina Aguilera, izay nitifitra ny lahatsariny tamin'ny toerana iray izay nitifitra an'i Britney Spears tamin'ny teboka hitany telo taona lasa izay.
Herinandro vitsivitsy taorian'ny nanambaran'ny mpanamory fiaramanidina ny famotsorana ny mpitovo faharoa dia tonga izyMandra-pahatongan'ny faran'izao tontolo izao, izay nahitana ny mpihira Kesha ihany koa. Nolazainy taminy ny zavatra nanentana azy hanoratra ity hira ity."Nieritreritra aho fa na mpihira hafa iray hafa, izahay dia manerana izao tontolo izao, manana alina mahafinaritra sy mahagaga ary tsy te-hatory izahay. Aleontsika izany fotoana izany mandra-pahatongan'ny faran'izao tontolo izao, "hoy izy. Lahatsary dihy apokalyptika avy any ambanivohitr'i ambanivohitr'i Ray Kay, izay nanao ny version 2 amin'ny clip.
Tamin'ny fahavaratra dia namoaka ilay fanadihadiana izyIzaho no The Fatem Femme. Ny fanadihadiana dia manaraka azy rehefa manomana ny hamotsorana ny rakitsary fitoerany izyFemme Fatale. Ny lahatsary fanadihadiana dia manome lahatsary manokana avy amin'ny studio ho filalao ny lahatsary faranyMandra-pahatongan'ny faran'izao tontolo izao, fanadinana ary, indrindra indrindra, ny fitsangatsanganana mini-tany Las Vegas.
Britney ao amin'ny Femme Fatale Tour
Nandritra ny fizahantany kely, nanambara tao amin'ny fahitalavitra izy fa hanomboka ny fitsidihany vaovaoFemme Fatale. Taorian'ny fampisehoana nandritra ny fampisehoana voalohany, 6,2 dia nandany vola an-tapitrisa dolara amerikana[loharanom-baovao?].Femme Fatale TourNahazo vola an-tapitrisa dolara 69 i 11. fanatanjahan-tena tsy maka tombony amin'ny 2011. Ny sarimihetsika amin'ny diany dia noforonin'i Zalda Goco, izay niara-niasa tamin'i Gwen Stefani na Lady Gaga. Ny tour Femme Fatale koa dia voarakitra ao amin'ny DVD sy ao amin'ny version 3D. Ny rakitsary dia avy any Toronto, izay nandraketana azy nandritra ny roa andro.
30. August 2011 tany Los Angeles tamin'ny alina dia nekena ny MTV Video Music Awards. Tao anatin'iny hariva iny, 2 no nahazo ny loka ho an'ny lahatsary mozika malaza indrindra ho an'ilay hiraMandra-pahatongan'ny faran'izao tontolo izao. Nomem-boninahitra azy koa izy, ary nahazo ny mari-pahaizana "Michael Vanguard" ho an'i Michael Jackson ho fankasitrahana ny asany lava sy mahasoa. Tamin'ny resadresaka niaraka tamin'ny MTV News, nilaza izy fa izy no singa manaraka amin'ny rakikiraFemme Fataleho hiraCriminal. Ny lahatsary tamin'io mpitovo io dia nilalao koa avy amin'i Jason Trawick, fofombadiny.
Enin-taona aorian'ny famoahana ny fanangonana voalohanyB In The Mix Ny RemixesNanapa-kevitra ny hamoaka ny andrana izy ary navoakaB ao amin'ny Mix: The Remixes Vol. 2. Tamin'ny voalohany dia nieritreritra fa hira vaovao sy hira efa navoaka tsy ela akory no hiseho eo amin'ny rakitsary saingy tsy nisy ny famoahana vaovao tamin'ny farany.
Tao amin'ny 2012, nanjary endrika sarin'ny Dance Twister izy, izay nandravahany sary nalain'i Ray Kay. Izy koa dia lasa iray amin'ireo mpitsara efatra amin'ny dika amerikana amin'ny fifaninanana X-Factor. Navoakany koa fantany fanta-daza fanta-daza Fantasy Twist, ary FOX dia nandefa fizarana iray hafa an'ny Glee, manome voninahitra Britney. Britney koa no nanjary vehivavy manankarena indrindra manerantany izay nahazoan-danja 58 dolara an-tapitrisa (tsy tafiditra ao amin'ny X Factor). Ity fizarana ity dia antsoina hoe Britney 2.0. Tsy nahita fahombiazana ireo mpankafy Britney, satria hita taratra tamin'ny fiainana ratsy indrindra teo amin'ny fiainana Britney izany. Na izany aza, dia nanjary ilay andrana 4 tena be mpijery indrindra izy io. serial series; Ny mpijery Amerikana 7 460 000 dia nijery voalohany. Nampiantrano ny album #willpower an'ny mpihira amerikanina Will.i.ama ao amin'ny tokana ihany koa i BritneyMiantsoantso. Ity hira ity ihany koa dia ny #1 amin'ny iTunes any amin'ny firenena 54 ary lasa mpitovo voalohany teo amin'ny tantara mba hanana iTunes any amin'ny firenena maro.
2013: Mpikambana vaovao,Britney Jean, Voninahitraary fandraisana andraikitra ao Las Vegas
Ity fizarana ao amin'ny lahatsoratra ity dia tsy ampy ny fahitana ary mety ahitana fampahalalana izay tokony hohamarinina.
Raha fantatrao io resaka io, azafady mba hanampy amin'ny fanamarihana ireo fanambarana ireo amin'ny fampidirana ireo loharano azo antoka azo antoka.
Anarana amin'ny fampisehoana any Las Vegas.
Nofehezin'ny Britney Spears tamin'ny fomba ofisialy ny 2013 tamin'ny fiandohan'ny taona fa niasa tamin'ny alàlan'ny albumy Studio izy, izay tokony havoaka ny taona mitovy amin'ny fararano. Ny ekipan'ny Britney dia nanamafy ireo mpamokatra toy ny Hit Boy, Elia Blake, Ina Wrolsden, Darkchild, Danja, Sia Furler ary will.i.am. Noho ny asany teo amin'ilay rakikira vaovao dia nandà ny mpitsara tamin'ny andalana amerikana X-Factor izy. Ny mpamokatra LA Reid koa dia nandà ny fandraisana anjara amin'ny X Factor.
12. January 2013 Britney dia nanamafy ny fihazakazak'i Jason Trawick, izay niarahany tamin'ny taona. Tamin'ny volana febroary, nisy horonantsary iray navotsotra mba hamerina ilay hiraMiantsoantso.
Tamin'ny faran'ny volana febroary, nanatrika ny fetin'i Elton John i Britney, toerana nahatongavany tao anaty akanjo mainty maingoka. Ny tena mahagaga ny rehetra dia ny loko volon'ny Britney vaovao - volomparasy. Niseho niaraka tamin'ny namana vaovao koa izy, efatra taona i David Lucad, mpiasan'ny orinasam-panjakana. Nahita azy tamin'ny lesona golf izy, mpampianatra ary mpianatra izy. Nilaza izy ireo fa nifampijery avy hatrany. Fotoana fohy taorian'izay dia niseho ny fanombantombanana fa nikasa ny hiteraka an'i David i Britney.
Nanasonia fifanekena momba ny fanekena an'i Las Vegas tao amin'ny Planet Hollywood i Britney, izay miala amin'ny fahavaratra amin'ny 2014. Ny fifanekena dia tsy ahitana afa-tsy 8 fampisehoana herinandro isan-taona, izay midika fa ny Britney ihany no hanao ny volana 2 monja amin'ny taona. Ny fifanarahana dia ahitana ihany koa ny fanampiana an'i Britney Spears handray anjara amin'ny fety iray manerana ny tanàna. Hisy fiovana tsy mitsaha-mitombo hatrany ny fampisehoana ka tsy manadino ny fahalianana izany ary nanomboka ny fitsapana izany tamin'ny Jolay. Hoy i Britney:"Tena tena mafy tokoa aho amin'ny fampisehoana ho avy eto Las Vegas. Tsy ho mora ny fampisehoana. Ho toy ny antoko iray tsy ho vita ny fanombohana ary hahazoana azy io, tsy maintsy misy ny endrika tsara indrindra aho ary aleo mandeha tsara. Mientanentana aho fa ny fampisehoana dia hiorina amin'ny teknolojia farany indrindra ary ho tena top-notch. "Ny fanarenana an'i Planet Hollywood dia mandany vola iray tapitrisa dolara 20, izay manodidina ny 380 tapitrisa. Ho tonga amin'ny 30 i Britney ho an'ny dolara an-tapitrisany, izay saika 580 000 000.
Tamin'ny volana Aprily, Britney nivoaka avy tao aminy ao amin'ny faharoa ambin'ny folo ditin-kazo manitra Island Fantasy, distriubuovaný tany Eoropa sy Etazonia, dia nitifitra vaovao photoshoot ho an'ny gazety endrika, niseho teo amin'ny ara-barotra ho an'ny baolina ekipa Dodgers sy hanamafy ny fandraisana anjara ny Kongoley fety Wango Tango, nanatrika tao anatin'ny taona 2011. Ankoatra izany, Brit nandefa ny hira "Ooh La La" ho an'ny horonantsary Smole, izay nandositra ny 17. Enga anie ny 2013 ary azo atao ny hiseho amin'ny album Britney vaovao. Ilay sarimihetsika dia nanana ny sarimihetsika 6 tany Etazonia. Jolay 2013 sy any amin'ny Repoblika Tseky 8. 2013 Britney dia tovovavy be volo.
1. May (USA 30. Aprily), dia niseho voalohany sary Britney nankany amin'ny Studio Ary tamin'ny farany dia nanomboka nanamafy fa Britney nirakitra an-tsoratra ny hira vaovao, fahavalo album, izay, araka ny mpanatanteraka mpamokatra (by will.i.am) dia tokony ho tena akaiky. Nanomboka niresaka momba ny filoham-piantsenan'i Lady Gaga sy Britney ihany koa izy, satria samy hita tao amin'ny trano fandraisam-peo izy ireo tamin'io andro io ihany.
Tamin'ny fiandohan'ny volana 2013, Britney dia nahazo ny laharana faharoa amin'ny lisitry ny vehivavy sexy, araka ny gazetiboky Maxim. Tamin'izay fotoana izay ihany, ny anaran'ireo hiran'i Britney dia niseho, ny anarany dia naminavina rakikira manokana. 11. Misaotra an'i Wango Tango. Tao anaty resadresaka nifanaovana tamin'i Maria Lopez, niresaka ny rakikirany vaovao i Britney, ny fomba fiasan'ny traikefa sy ny fitiavany ny sôkôla fotsy. Raha nijery ny sarin'ny zanakavavin-dreniny roa taona i Britney, dia nanindry mafy ihany koa izy fa te-zaza hafa izy, izay te-hanao ankizivavy kely foana.
17. Afa-nandositra May mpitovo Ooh La La amin'ny sarimihetsika hoe Ny Smurfs 2, izay nanana fahombiazana lehibe amin'ny mpankafy sy izay taty aoriana iray voarakitra an-tsary video clip, tarihin'ny Marc Klasfeld. Roa andro taty aoriana VEVO fanamarinana iray niantsoantso & Manaova feo fifaliana, izay tamin'izany fotoana vao 220 tapitrisa mahery ao amin'ny youtube.com. 27. May 2013 mihoatra ny mpankafy Britney amin'ny 1 000 000.
Tsy ela dia tsy nanana fanazavana na sary paparazzi i Britney. Mpankafy an'i Britney Nampirisika naminavina koa mikasika ny iray na Ooh La La hiseho eo amin'ny takelaka Hot 100 nanaraka azy mpitovo, niantsoantso & Manaova horakora nianjera.
Rehefa nanomboka nanandrana ny olana ara-tsaina i Amanda Bynes ary nanaratra ny lohany, dia nanampy azy handresy ity fotoana ity i Britney ka nizara ny traikefany manokana taminy.
9. Tamin'ny volana Jona, ny sary voalohany dia avy amin'ny firaketana horonantsary ho an'ilay Ooh La La tokana, tarihan'i Marc Klasfeld. Ny lahatsary voalohany dia 11. Jolay 2013. 16. Jona Czech MTV nalefa ihany koa ny fampisehoana alina amin'ny Britney Spears, izay ahitana fanadihadiana Izaho no Femme Fatale, izay hita taona 2011, 7 peo. tantara an-tsarimihetsika ary lahatsary iray ho an'ny Till The World Ends sy TOP 20 singles just Britney.
Nanjary fanintetina fanintelony koa i Britney, tamin'ity indray mitoraka ity ny Twister Dance Rave. Nandritra izany fotoana izany, ny fiaraha-miasa amin'ny mpihira Kesha dia voamarina indray, izay nanoratra, ankoatra ny iray, ny Till The World dia miainga amin'ny alim-pirenen'i Britney teo aloha Femme Fatale. Ny Britney Spears dia niresaka tamim-pahavitrihana tamin'ny mpankafy Twitter, nampitombo azy ireo bebe kokoa, satria iray amin'ireo kintana vitsivitsy no manao izany. Ny alatsinainy, ilay mpihira Ooh La La dia niantomboka tamin'ny radio Z100, nilalao azy isan'ora. Nanamafy koa izy io fa 8. Halefa amin'ny 2013 ny rakikira studio.
Vetivety dia nilaza i Britney fa te-hizaha ny fitsangatsanganana erantany nandritra ny fifanintsanana nataon'ny Las Vegas, mpankafy no faly. Ny fatoram-barotra any Etazonia sy Eoropa, anisan'izany ny Repoblika Tseky, dia nanomboka tamin'ny famarotana ny Ooh La La tokana, izay tena liana. Nanomboka nanombantombana ihany koa ny fiaraha-miasan'i Britney sy Rihanna niaraka tamin'ny 2011. Nisy tatitra nilaza fa bevohoka i Britney, saingy niverin-dàlana avokoa izy rehetra. Nefa niaiky i Britney fa nihevitra izy fa bevohoka indray mandeha, saingy tsy izy. Miharihary fa miharihary eo imason'izy ireo miaraka amin'i Davida izy. Nanaiky ny zanany lahy ho namana mahafinaritra izy hilalao ary i Britney no antsika.
28. Jona Jona Britney dia namoaka lahatsary izay ilazany hoe:"Tiako ny ankizilahy pelaka rehetra!"Amin'ity lahatsary ity, Britney dia naneho ny heviny momba ny fanambadian'ny lehilahy samy lehilahy any Etazonia. Nanoratra izy avy eo tao amin'ny Twitter:"Faly be sy faly aho nandre ny didim-pitsarana."
Nandritra ny fotoana lava, tsy nisy zavatra manokana nitranga, niasa mafy tamin'ny Alba 8 i Britney. Rehefa niseho nandritra ny fotoana kelikely izy dia niravoravo, nihomehy ary faly. Nisalasala ny Radio Czech mba hametraka an'i Ooh La La ho etetika noho ny antony tsy fantatra. Fotoana fohy taorian'izay dia nalaina sary izy rehefa nandeha namakivaky ny fidirana an-tsehatra nankany amin'ny studio. Koa nahazo ny fifaninanana ho an'ny rakikira mialoha indrindra ny taona izay resy ohatra. Eminem, Lady Gaga na Beyoncé sy ny fitsapan-kevitra mialoha indrindra ny zava-nitranga ny taona 2013. Ho valin'izany fanadihadiana izany dia nandefa hafatra tao amin'ny Twitter izy ary nisaotra ireo mpankafy noho ny fanohanany azy ireo."Mafy be aho;). Tena faly aho handefa tsiro ny alahatro vaovao ... Tsy afaka miandry anao aho hizara aminao ny zavatra ataoko. Ity no volako manokana manokana indrindra hatramin'izay - Britney ", nanoratra izy.
Tamin'ny fiandohan'ny volana Jolay, William Orbit, iray amin'ireo mpamokatra an'i Alba 8, nanoratra hoe:"Will.i.am dia vao avy nahavita ny iray amin'ireo hiran'i Britney tsara sy tsara indrindra hatramin'izay! Etsy ankilany, dia mahatalanjona amin'ny hira vaovao izy! Haka an-keriny ianao! "
6. Jolay dia tonga tao amin'ny VEVO ny Womanizer 100 000 000 ary nanjary ny clip manaraka avy amin'i Britney, izay nahazo ny mari-pahaizana VEVO. Ny roa teo aloha dia I Wanna Go ary hatramin'ny faran'ny World Ends, izay nahazo ny taratasy fanamarinana tamin'ny faran'ny 2012.
Tamin'ny volana jolay, i Britney dia hita niaraka tamin'ny zanany koa tao amin'ny toeram-pilalaovana. Izy dia niambina tamina mpiambina telo ary ny olona dia tsy nahazo alalana haka sary an'i Britney. Tsy fantatra mazava hoe iza no antony.
Ny Alakamisy 11. Julie dia nanolotra lahatsary tokanaOoh La La, izay nahitàna ihany koa ireo zanakalahin'i Britney Sean Preston sy Jayden James. Ao amin'ny horonantsary horonantsary iray, mandray mpilalao sarimihetsika i Britney amin'ny famoahana ny tady mahazendin'i Gargamel. Efa nahita fahombiazana ity lahatsary ity; Ho an'ny 24 ora, nahazo vola efa ho 4 an-tapitrisany izy, ary 10 iray tapitrisa eran'ny pro VEVO isan-kerinandro. Ny sary nalaina voalohany tany Las Vegas dia niseho. Voamarina fa tena i Britney tokoa. 18. Jolay, Radio2 radio dia nametraka ny Ooh La La tokana mahomby. Tamin'ny fiafaran'ny volana Jolay, nipoitra ny tsikombakomba fa handray anjara amin'ny 2014 Superbowl i Britney. Britney 28. Tamin'ny volana jolay, dia niaraka tamin'ireo zanany lahy sy ny namany ihany koa izy niaraka tamin'ny filoha Smurf 2. Nanao akanjo hafa izy fa tsy akanjo manga ary nosoniavin'ny mpankafy. Ankoatra izany, ny CD Compilation CD iray antsoina hoe The Essential Britney Spears dia navotsotra.
Ny pejin'ny Buzzfeed.co dia namoaka 70 ny antony mahatonga ireo mpankafy ho tia Britney Spears.Tao anatin'ireo tranga vitsivitsy, nanofahofa azy - na ny mpankafy azy.
15. Nohamafisina i August fa nihira hira iray niaraka tamin'i Britney Spears i Miley Cyrus. Nanomboka nahita lahatsary sandoka sy fampahalalam-baovao diso momba ny rakikirany sy ny album Britney izy ireo. Zavatra iray monja: ny vanim-potoana vaovao dia ho toy ny baomba atomika. Io no faharoa tao amin'ny The Zone.
Taorian'ny fahombiazan'ny fahadisoam-panantenana nataon'ny Lady Gaga tokana tamin'ny Aogositra, dia nisy ny fironana vaovao nipoitra tao amin'ny Twitter;"Azafady, ry Britney, afaho ny mozika pop!"Ary, araka ny nanamarihany azy, tena niomana tokoa i Britney.
19. ny tranonkala ofisialin'ny BritneySpears.com dia nogadraina tamin'ny volana Aogositra. Raha tokony ho ny sakafo dia nisy fampitandremana niseho tao amin'ny efijery: Britney Spears; Ny masoko rehetra dia eo amiko; 29 andro. Nanomboka adaladala ireo mpankafy ary koa nifanakalo resaka nifanaovana tamin'ny 17. September 2013. Tamin'ny fiafaran'ny volana, nafenina ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy Britney. Niomana ny fiomanana amin'ny vanim-potoana vaovao. Ny andro farany tamin'ny volana Aogositra dia lohatenin'ny mpitovo mpanampy; Work Bitch. Ny lahatsary ho an'ity mpitovo ity dia nalaina nandritra ny telo andro; avy amin'ny 8. ho an'ny 11. Septambra. Ny anaran'ny hira nataon'i Miley Cyrus-SMS (Bangerz), izay nanatrehan'i Britney.
Tany am-piandohan'ny volana Septambra dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy fa hanao an'i 17.9 i Britney. ao amin'ny Good Morning America, amin'ny andron'ny Pilotan'ny 8 Alone. 7. September Britney ao amin'ny Twitter dia nandefa ny saripika voalohany amin'ny fiaramanidina ho an'ny mpanamory. Toa mitovy aminy amin'ny clip ao amin'ny Piece Of Me izany. Tonga dia nanomboka nifanakalo hevitra momba ny vanim-potoana Blackout 2.0 ireo mpankafy.
9. September Britney dia nandefa sary ny zokiny vavy tao amin'ny tambajotra sosialy, nalainy tao amin'ny fifanarahana teo amin'ny horonantsary horonantsary tao amin'ny Werk Bitch. Tonga dia nazava ny tontolo iray manontolo fa niverina indray ny ampahan'ny "antitra" Britney. Nanaiky ihany koa ireo mpankafy fa antsoina ilay hiraWerkHira naWorkBitch. Will.i.am dia namaly tamina mpitoraka blaogy momba ny anarana tsotra fotsiny, namaly hoe:"Tiako ny Bitch Werk. Inona no tianao kokoa? "Mihoatra ny 60% ny mpankafy no nanaikyWerk Bitch, dia nanjary ny anarana ofisialyWork Bitch. Alahady 15. Ny volana septambra, ny andro talohan'ny nanombohan'ny premon ilay, dia afa-nandositra ny hira Demo Internet. Britney izao fihirana izao ho mafy be vivery toy ny Electro tsy misy olona andrasana sy mpankafy vitsy sisa avy any amin'ny hira ... fa nihaona tamin'ireo hira tena tsara evaluations lohamilina ary ny andian-teny hoe "ianao Betta Asa Bitch" lasa andian-teny fampiasa matetika eo Britneyinými mpanohana.
1.10.2013 (2.10 ao amin'ny Repoblika Tseky.) Video tonga herinandro fa niseho tamin'i mihoatra noho 20 000 000 olona. Niverina indray i Britney, manomboka ny vanim-potoana vaovao. Ny horonan-tsary faharoa lasa lafo indrindra teo amin'ny tantara (mijoro 6 000 000 dolara, dia ny mitovy amin'ny momba 123 000 000 CZK). Eo anoloany dia lahatsary iray avy amin'i Michael Jackson Scream miaraka amin'ny anabaviny Janet. Olona iray tapitrisa dolara no lafo kokoa. Faly ireo mpankafy noho ny tsy fahafantarany ny vatana britney Britney, fa koa ny hoe Britney ao amin'ilay lahatsary indray mandihy indray mandeha. Britney dia tena Sexy lahatsary, mampiasa ny karavasy sy B-tafika nanomboka indray ny mampiasa ny iray amin'ireo anaram-bosotra maro Britneyiných - 2004-Ney - izay tsara famantarana. Ilay mpihira dia nanamafy fa nosoratan'i Britney ny lalaon'ny Perfume teo am-piatrehana an'i Jason Trawick. Tamin'ny volana Oktobra, Britney nisidina ho any Angletera mba hampiroboroboana ny rakikira ho an'ny onjam-peo BBC fampisehoana Breakfast Radio1 sy ny hafa vitsivitsy ny radio sy TV fandaharana lahateny ho Alan Carr. Zoma 17.10. (tamin'ny andron'ny fampisehoana ny fampisehoana), dia nisy mpitsabo ara-batana iray tao amin'ny bitchy iray tsy miankina niseho tany Eorôpa.
25. Ny Oktobra dia ny ampahany ofisialin'ny rakikirin'i Britney Jean ao amin'ny tambajotra sosialy mpihira. Nihetsiketsika ny ampahany amin'ny vatany i Britney, ary navoaka tao amin'ny fo nônô ny anaran'ilay rakikira. Ny rakitra koa dia nampahafantarin'ny 5. Ny volana Novambra, ny tarika faharoa antsoina hoe Parfume, izay hatramin'ny ela dia mpanohana Larry Rudolph, mpamokatra ary filohan'ny RCA, dia tena tsara. Nanoratra taratasy lava lava sy manokana ho an'ireo mpanohana azy i Britney tamin'ny fotoana namoahana ny fonony sy ny daty famoahana ilay mpitovo vaovao. Ankoatra ny zavatra hafa dia mivaky toy izao izy:"Misaotra betsaka noho ny nanarahako ahy tamin'ity lalana ity sy noho ny famelana ahy hanao izay tiako ... tsy mino aho fa efa lasa 8 izao. Studio album ary fantatro fa mbola miteny foana aho fa ny alaheloko manokana indrindra hatreto, saingy marina izany ary tena mirehareha tokoa amin'ity albumy ity aho. Nandeha an-taonany maro aho nandritra izay taona vitsy lasa izay, ary nanentana ahy hanao lalina sy hanoratra hira izay mety ho hitan'ny tsirairay amiko. Miasa amin'ny olona toa an'i Sia, William Orbit ary mazava ho azy, dia zava-mahatalanjona i Will.I.Am. Nihaino ny eritreritro rehetra izy ireo ary nanampy azy ireo hitondra azy ireo ho amin'ny fiainana. Misy hira am-pihetseham-po amam-pihetseham-po sy feno hatsaram-panahy ao amin'ny rakikira, saingy zava-dehibe ho ahy ny mampiseho ny heriko, ny fihetsika ary ny vulnerability. Mazava ho azy fa misy zavatra tsy ampoizina ihany koa ho anao. "Toy izao manaraka izao ny taratasy:"Tiako haseho anao ireo tranonkala Britney Spears. Artista aho, reny aho, mahafinaritra ahy. Izaho no namanao! Izaho no Britney Jean! "
Tamin'ny tapaky ny volana novambra, ny sasany amin'ireo hira 7 avy amin'ny rakitsary ho avy dia nalefa ho an'ny aterineto. Taorian'ny ora vitsy anefa, dia nesorina avokoa izy ireo. Ny hany hira izay tafaporitsaka teo anoloan'ny ny famotsorana ireo mpandeha, mamiratra Morning Star (vita fanoloran-tena Britneyiným lahy) sy Allen, izay efa ratsy isan'andininy, izay nanamafy iray amin'ireo mpamokatra. 23. Mpihira novambra nitsidika toeram-pitsaboana ankizy iray tao amin'ny Orange County, toerana nahitana ankizy voan'ny homamiadana. Naka sary ny olon-drehetra i Britney, nanolotra ny vondrona mpiaro ny Ooh La La tokana, ary nanao fanadihadiana tamin'i Ryan Seacrest.
Album of Britney Jean navoaka 28.11. any Norvezy, andro iray taty aoriana manerana an'i Eoropa sy 3. Desambra 2013 any Etazonia. Board nihaona tamin'ny tsara koa ny ratsy evaluations avy amin'ny Internet na ny vavahadin-tserasera sy ny mozika ny lehibe Britney mpankafy base fa voaisa ny fotoana fotsiny 33 tapitrisa mahery "miaramila". Ny valiny tsara indrindra dia ny hiraTil It's GonenyTik Tik Boom. Ny rakikira dia ny isa iray amin'ny firenena 36 amin'ny herinandro voalohany amin'ny varotra manerana izao tontolo izao.
Hatreto, ny fihetsika farany nataon'ilay mpihira dia ny album vaovaovoninahitranivoaka tao amin'ny 2016. The Review toerana tena tsara iReport nahazo famerenana, araka ny mpanoratra hevitra ny mpamokatra no niezaka ny hampihatra fomba maoderina, raha ny marina, na izany aza, tsy ampy ny birao believability sy ny lohahevitra matanjaka.
2: Britney: ampahany amiko
4: Circus (hira)
5: Tiako ny Rock N Roll
6: (Ianao no mitondra ahy) Crazy
7: Aza Avelanao ho Farany Ny Mahafantatra
8: Ao amin'ny Zone
9: Indray andro (ho azoko)
11: Asio izy
13: Raha mitady an'i Amy ianao
14: isaky ny mandeha
15: Manao asa
17: Slave 4 U aho
19: Oops! ... Nataoko indray izany (Hira)
20: Mamaky ny gaza
21: Nateraka mba hahasambatra anao
24: Nofinofy nandritra ny nofinofy
25: Manaova 'Somethin'
26: Handeha aho
28: Avy Any Anatin'ny Tsi-Petezako
29: Farany! ... Nanao izany indray aho
30: Izaho manohitra ny mozika
31: Ny Tour de M + M
32: Ny mombamomba ahy
33: Ny Tour Onyx Hotel
37: Miezaha bebe kokoa
38: Tsy zazavavy aho fa tsy vehivavy
43: Lucky (hira, Britney Spears)
44: Boys (hira, Britney Spears)
45: Voninahitra (Album, Britney Spears)
46: Stronger (hira, Britney Spears)
47: Ooh La La (hira, Britney Spears)
48: Britney (rakikira)
49: ... Baby One More Time (hira)
Britney Spears, feno anarana Britney Spears Jean (* 2. 1981 Desambra McComb, Mississippi, Etazonia) dia mpihira pop amerikana, nandresy ny Grammy sy MTV Video Music Awards, mpamoron-kira sy ny mpilalao sarimihetsika. Tena lasa fantatra amin'ny hira "... Baby One More Time", "Oops! ... nataoko azy indray", "Manapoizina", "Gimme More," "mpanenjika vehivavy," "tapa-Ahy", "Mangina amiko izany" "Ambara Eran-tany vazan", fampiantranoana ilay hira "niantsoantso & Manakorà" mpanao rap Amerikana Will.i.am sy mihira feonkira amin'ny sarimihetsika ny Smurfs 2.
Britney / Bretagne no fizaràna faharoa ny andiany faharoa, ary amin'ny ankapobeny ny fahefatra amby roa-polo tantara ny tantara mitohy amin'ny fahitalavitra Amerikana hafaliany. Episode nosoratana sy ny fitarihan 'andian-dahatsoratra mpamorona, Ryan Murphy, dia fandaharana voalohany 28. September 2010 ao amin'ny fahitalavitra Fox TV ary mitory Britney Spears. Member hira ,, Brittany Pierce (Heather Morris) traikefa tao amin'ny mpitsabo nify rehefa avy fanatoranana hallucinations in izay niseho tahaka ny Spears tao amin'ny fotoana malaza ka nanaraka azy indray ny sasany mpikambana hafa ao amin'ny fiangonana. Ny tena mpihira Rachel (Lea Michele) sy Finn (Cory Monteith) dia miaina eo amin'ny fifandraisanareo voalohany olana fiangonana mpitarika, Will Schuester (Matio Morrison) dia miahiahy ny vaovao namana pampianarana mpanolo-tsaina Emma Pillsbury (Jayma Mays), Dr. Carl Howell (Jaona Stamos) .
Britney: Ny endrikao ahy dia fanatontosana velona nataon'i Britney Spears. Ny hetsika dia natao tao amin'ny Planet Hollywood Resort and Casino ao Las Vegas, Etazonia. Ny fampisehoana manontolo dia maneho ny asan'i Britney Spears.
Britney Jean no rakipahalalana tantara an-tsoratry ny Amerikanina mpihira Britney Spears. Amin'ny fomba ofisialy, tokony hivoaka ny 3. December 2013 tany Amerika, saingy tany Eorôpa andro vitsy lasa izay sy 29. Novambra 2013. Ilay mpihira ao amin'ny rakikira dia nanomboka niasa hatramin'ny fiandohan'ny 2013. Nandritra ny taona dia nitenenan'i Britney ho ny rakitsariny manokana indrindra izy. Ny voalohany dia avy amin'ny rakikira tokan-tena dia tsy dia nahomby lalana Asa Bitch, izay nahazo ny loka noho ny volamena Etazonia fivarotana antsasaky ny iray tapitrisa ny tokan-tena. Ny singa faharoa dia ny Parfume. Ary ny toerana tsara indrindra dia 76. Tsy nanao zavatra betsaka i Alba satria tsy dia nahitana fivoarana. Ny toerana tsara indrindra ao amin'ny Billboard dia tao amin'ny 4, izay toerana ratsy indrindra ho an'ny rakikirany amin'ny asa rehetra nataony. Fotoana fohy talohan'ny rakikira nitete fihetsiketsehana hira Mpandeha ary maro mpankafy no nanamarika fa ny vocals eo amin'ny tsirairay ny hira feo samy hafa, ary avy eo nisy olona fantatra ny "hafa" feo tahaka ny feon'ny mpihira Myah Marie, izay "fitsarana" mpihira fototra vocals ity album, ary taty aoriana amin'ny boky vaovao ny tsy voatsabo vocals taorian'ny fanafahana nampiseho fa mety hisy fotsiny ny mpihira Jazz. Ny feony dia miseho na dia tsy voasoratra ara-panjakana aza izy.
Circus faharoa tokana avy amin'ny album Circus an'ny mpihira amerikanina Britney Spears. Nahazo tamin'ny fahitalavitra tamin'ny Janoary ny clip. Ny InfoBritney Spears ho an'ny Clip Circus dia efa nandeha tany amin'ny fitsarana. Nolazainy fa mampihomehy ireo elefanta izay niseho tao anaty horonantsary izy. Manaiky an'i Britney fa miezaka ny elefanta, ary mandà izany ihany koa ireo tompon'ireo elefanta. Amin'izany fotoana izany, amin'ity horonantsary ity, dia mamboraka ny fofony miafina vaovao fanta-daza izy.
I Love Rock N Roll (Rock N Roll) dia hira avy amin'ny tarika 1975 Anglo-American The Arrows. Anisan'ireo tononkira rock sy tononkalo malaza indrindra izy ireo, indrindra fa ireo sarimihetsika malaza, indrindra fa avy amin'i Joan Jett sy Britney Spears.
(Ianao mitondra ahy) Crazy dia tononkira fahatelo Britney Spears avy amin'ny rakikirany voalohany ... Baby One More Time. Navoaka nandritra ny telovolana fahatelo tao amin'ny 1999 ilay hira ary nampidirina tao amin'ny Greatest Hits: The album's biggest hits album.
Aza Avelanao ho Farany Ny Mahalala Ny hira sy fahefatra farany amin'ny rakikirikana Oops faharoa dia efa naveriko indray ilay mpihira amerikanina Britney Spears, izay navotsotra nandritra ny telovolana voalohany tamin'ny 2001.
Ao amin'ny Zone ny rakikira efa-drakitra fahaefatra nataon'i Britney Spears navoakan'i 18. Novambra 2003. Niaraka tamin'ity volombava ity izy dia naverina niverina tany amin'ny elitelan'ny pop miaraka amin'ny Timetime sy Toxic, izay teo amin'ny tetezan'ny Amerikana ihany koa. Ao amin'ny Zone, ny feon'i Britney Spears dia somary tsy mitovy amin'ny albums teo aloha ... Baby One More Time, oops! ... Nanao izany indray ry Britney.
Indray andro any (I dia hahatakatra) iray (hahatakatra) ny hira nataon'i Britney Spears navoaka nandritra ny ampahefatry ny fahatelo taona písniSong Britney 2005.Informace nanoratra tapa-bolana talohan'ny nianarany ny ny bevohoka sy ny zanany voalohany, Sean Preston. Spears nanoratra ny hira iray manontolo amin'ny piano fotsiny, ny asa ho toy ny mpamokatra eo amin'ny fikarakarana ny Guy Sigsworth, izay novokarina isaky koa.
Britney 2.0 dia lalao an-dàlam-panazoran'ny gale amerikana Glee. Ahitana horonam-peo valo avy amin'ny fizarana fahaefatra amin'ny ampahany faha-efatra, izay fizarana faharoa izay nanome ilay mpihira Britney Spears. Ny EP dia ahitana hira enina sy mashups roa an'ny hiran'i Spears, avy ao amin'ny album voalohany ... Baby One More Time ho an'ny alàlan'ny alim-piantsoana fitoerany Femme Fatale. Tsy navoaka afa-tsy digital ny EP.
Hold It Against Me dia hira nataon'ny mpihira Amerikana Britney Spears. Ity hira ity dia ao amin'ny rakitsary fitoerany. Nalain'ny Dr. Lioka sy Max Martin. Nifindra avy hatrany ny hira voalohany tany Kanada, Belzika, Danemarka, Nouvelle Zélande, ary ny sarin'ny Billboard. Izany no efa tonga izao ny fahefatra tokan-tena Britney Spears, izay nibodo avy hatrany an-tampon-sary sy noho ny mpihira lasa mpanakanto faharoa teo amin'ny tantara, izay niezaka ny hitandrina ny nitarika tokan-tena teo an-tampon'ny imbetsaka ny tabilao. Ilay mpanakanto voalohany dia mpiara-miasa amin'i Mariah Carey.
Ny Britney dia mety ho: Britney Spears, American singerBritney (album), 2001Britney: Ho an'ny firaketana, fanadihadiana avy amin'ny 2008
Raha hitady Amy (Ny rehetra te-Amy) no hira fahatelo avy amin'ny mpihira Circus mpihira Britney Spears. Navoakan'ny 10 ilay hira. March 2009.Videoklip
Isaky ny hira dia nosoratan'ny mpihira amerikanina Britney Spears. Singl dia niseho tao amin'ny rakikirany antsoina hoe In The Zone.Videoklip Director David LaChapelle nanao lahatsary tena mampiady hevitra momba ity hira ity. Ao amin'ny dikan-teny maoderina, tsy navoaka, ny Britney Spears dia tokony handraraka pills, hisotro toaka, ary ho faty. Saingy ny hetsi-panoheran'ireo mpankafy sy ny vahoaka dia nanery azy hanao ny dikan-teny faharoa azo ekena kokoa. Na izany aza, misy karavasy roa, ny US dia somary mahantra noho ny mahantra kokoa eto amin'izao tontolo izao, ary kely ny rà ao.
"Work Bitch" no mpihira ilay mpihira Britney Spears mpihira avy amin'ny albumy "Britney Jean" valo taona. Ny mpanoratra sy mpihira Britney dia nilalao tao amin'ny tokan-tena. Ny hira dia nanampy nanoratra sy namokatra mpamokatra Amerikana iray sy mpikambana ao amin'ny Black Eyed Peas, will.i.am. Work Bitch dia efa nandositra ny 15 tao amin'ny aterineto. September 2013 ary noho izany dia nanapa-kevitra i Britney fa hanao famelabelarana ofisialy ofisialy androany. Ny audio dia voarakitra tao amin'ny VEVO minitra vitsy taorian'ny fampielezam-peo radio. Amin'ny iTunes, ny iray dia azo alaina amin'ny 16. September 2013. Ora vitsivitsy taorian'ilay famotsorana dia niakatra tao amin'ny iTunes ireo singa ireo tany amin'ny firenena 40.
Womanizer no mpilalao pilina fanasongadinana tantara an'ny Britney Spears, Circus, nivoaka tamin'ny Septambra 2008. Womanizer dia namerina ny fahombiazan'ilay singa voalohany amin'ity mpihira ity ... Baby One More Time.
Slave 4 U (Izaho dia andevo ho anao) no hira voalohany Britney Spears avy amin'ny Britney Spears. Ny hira dia navoaka nandritra ny telovolana fahatelo amin'ny 2001. Ity hira ity dia matetika hita ho dingana manaraka amin'ity mpihira ity, satria mihodina manodidina ny rhythm R & B. Ny lahatsary ihany koa dia manosika an'i Britney lavitra lavitra ary manafaka azy amin'ny sarin'ny virjiny sy ny ankizivavy manaraka.
Indraindray dia ny hira faharoa tamin'ilay mpihira Amerikana Britney Spears dia navoaka tao amin'ny alaham-peo voalohany ... Baby One More Time.Information about songDia navoaka ny ampahatelon'ny 1999 ny hira. Voasoratra sy novokarin'i Jorgen Elofsson, izay nahazo ny loka BMI amin'ity hira ity ao amin'ny 2000 ao amin'ny sokajy tsara indrindra amin'ny sokajin'ny taona.
Oops! ... I ve izany indray (Oops, nataoko izany indray) no hira voalohany avy amin'ny iray ihany rakikira American Britney Spears, izay niseho tao amin'ny 2000.Informace písniPíseň nosoratana sy novokarin'ny Max Martin sy Rami. Ity hiran'ny dihy ity dia tokony hampiseho ny fizarana mampidi-doza kokoa amin'ny Britney amin'ny fomba fiarahabany amin'ny sipany izay tiany fotsiny. Ity hira ity dia iray amin'ireo toetra mampiavaka ity mpihira ity ary lasa iray amin'ny asa mahomby indrindra nataony.
Atsipazo ny gaza dia 3. tokana avy amin'ny 5. ao amin'ny studio album Blackout avy amin'ny amerikana mpihira pop Britney Spears. Tamin'ny volana Martsa dia navoaka ihany koa ny lahatsary iray, miaraka amin'ireo mpankafy marobe tsy manafina ny alahelony. Tsy nandray an'i Britney tao izy, toy ny efa nampiasainay, fa ny fitiavan-tanindrazany, izay miady amin'ny ratsy.
Nateraka mba hahasambatra anao ilay hira fahaefatra Britney Spears avy amin'ny lahateniny ... Baby One More Time. Navoaka tany Eoropa sy Kanada ny hira nandritra ny ampahaefatry ny 1999.
Britney 2.0 no fizarana faharoa amin'ny andian-tsarimihetsika fahaefatra tamin'ny andian-dahatsary Amerikanina Glee sy ny fizarana fahaenina faha-16 amin'ity andiany ity. Izy io dia nosoratan'i Brad Falchuk, notarihan'i Alfonso Gomez-Rejon ary navoakany voalohany tany Etazonia tamin'ny 20. September 2012 ao amin'ny Fox TV Channel. Ity no fizarana faharoa nankalazaina ho fanomezam-boninahitra an'i Britney Spears. Anatin'ity fizarana ity dia misy mpitsidika kintana manokana Kate Hudson hita tahaka ny Cassandra Jolay, Rachel's Dance Teacher.
Overprotected dia hira nataon'ny American Britney Spears, izay navotsotra ho ny faharoa amin'ny rakikirany fahatelo antsoina hoe Britney. Navoaka nandritra ny fizarana voalohany tamin'ny 2002 ilay hira.
Dream in a Dream Tour dia ny fitsanganana fahatelon'ilay mpihira amerikanina Britney Spears. Izy io dia nanohana ny rakitsary studio fahatelo, Britney. Nanomboka ny 1. Novambra 2001 ary nifarana tamin'ny 28. Jolay 2002. Natao tany Amerika Avaratra ilay fitsidihana ary fampisehoana iray monja no nankany Azia sy Japana.
Ataovy Somethin '(manao zavatra) dia hira Britney Spears, izay tonga tao amin'ny tahirin-tsary tsara indrindra lehibe indrindra Hits: Ny Prerogative.VideoklipRežie Clip ity dia première naka Britney ny tenany, fa ny hanampy anao ihany koa no manasa ny olona za-draharaha kokoa, ary Billie Woodruffa.V Natao amin'ny dihy hafa ny clip. Britney ao le clip hita eny amin'ny habakabaka, any amin'ny fikambanana, amin'ny fisotroana, fa mazava ho azy ao ambadiky ny mikrô. Tamin'ny volana Desambra 2005 Clip izany no nambara ho toy ny ratsy indrindra le clip, izay Britney nitranga fanintelony ny asa.
I Wanna Go Ny singa fahatelo avy amin'ny album Femme Fatale, mpihira amerikanina Britney Spears. Navoakan'ny 13 ilay hira. Jona 2011. Ny famokarana dia novokarin'ireo mpamokatra Max Martin, Shellback.
Toxic dia hira nataon'i Britney Spears avy amin'ny rakikirany fahaefatra, In The Zone, izay nahazo ny Grammy Awards ihany koa. Ny hira dia navoaka nandritra ny ampahefatry ny taona 2004.Informace písniPíseň namokatra ny Bloodshy sy Avant, izay namaritra ny hira araka ny James Bond namakivaky tamin'ny Bollywood filmem.Píseň dia momba ny lavo amin'ny fitiavana, rehefa mahatsapa fa mamboatra niharan-doza, ary ny fitiavana dia ny zava-mahadomelina. izay manana fiantraikany toy ny sigara na alkohol.VideoklipRežie Clip naka Joseph Kahn, fa ny teny mihitsy le clip namorona Britney sy tany amin'ny lafo indrindra clip historie.Klip manomboka eo amin'ny fiaramanidina, izay Britney dia miasa ho toy ny fiaramanidina. Kabine mahafeno ny anti-panahy, ary nanomboka hanoroka Azy, rehefa afaka kelikely izany dia misarika ny saron-tava sy mangalatra am-paosiny klíč.Část rehefa manana Britney mena volo sy ny hoditra lamba voatifitra teo an-dalamben'i Paris. Amin'izao fotoana izao, i Britney dia anaty sehatra tsy misy tahotra ary afaka mitantana afo sy fiarovana maro.
Avy ao amin'ny lohan'ny My Heart broken dia ny laharana fahadimy sy farany izay navotsotra tao amin'ny album debit album Britney Spears ... Baby One More Time. Navoaka i 15. December 1999 tany Aostralia sy Etazonia, tamin'ny Janoary 2000 koa tany amin'ny Repoblika Tseky.
Oops! ... efa nataoko indray ilay album faharoa mpihira amerikanina Britney Spears. Navoakan'ny 16 ilay rakikira. Misaora an'i 2000 ary nahomby tanteraka indray. Na dia nitsikera ny mozika Britney Spears aza ny mpitsikera mozika, dia mendri-piderana ny fanehoan-kevitra ao amin'io rakikira io.
Me Against The Music no hira voalohany nataon'ilay mpihira Amerikana Britney Spears tao amin'ny faritra. Navoaka nandritra ny ampahaefatry ny 2003 ilay hira. Nihira io hira io niaraka tamin'i Madonna.
Ny Tour M + M dia fiarahabana fifadian-kanina fahaefatra Britney Spears mpihira amerikanina. Misy andiana enina enina notontosaina tao amin'ny kliobak'i Etazonia ihany. Nanomboka ny 1. Miangavy 2007 ary hifarana amin'ny 20. May 2007. Ny fampisehoana dia naharitra ny 12-16 minitra ary nihira i Britney tamin'ny playback ary saika tsy nandihy. Ny famelabelarana dia novokarina nandritra ny minitra, fa raha tsy izany kosa dia voatsikera tsinontsinona.
Ny fahatsiarovako dia hira Britney Spears izay navoakany tao amin'ny 2004. Ny tononkira dia nosoratan'i Bobby Brown.VideoklipKlip tany am-boalohany dia notarihin'i Jake Nava ary nisy fampakaram-bady niaraka tamin'i Kevin Federlin vadiny. Ny horonan-tsary dia fotoana iray hafa ho an'ny gazetiboky Rolling Stone an'ny Britney tena be mpankafy indrindra ho ny Clip an'ny taona 2004. Mampihomehy ny mpitsidika Muchmusic nanambara ity lahatsary ity ny ratsy indrindra tamin'io taona io ihany.
Ny Onyx Hotel Tour no fitsidiham-bolo fahaefatra ho an'ny mpihira amerikanina Britney Spears. Izy io dia nanohana ny rakikirany estiary faha-efatra In The Zone. Nanomboka ny 2. Martsa 2004 sy 6 no tsy maintsy vita. June 2004, noho ny ratra nahazo an'i Britney fony izy nitifitra horonantsary horonantsary tamin'ny Fientanam-po. Tsy maintsy nesorina ny fampisehoana 37 tany Amerika Avaratra. Ny fitsidihana dia natao tany Amerika Avaratra ary avy eo tany Eoropa.
Ny mahatsiravina dia ny hira faha efatra sy farany ao amin'ny album In In Zone, izay tarihan'i Britney Spears. Ny tokan-tena dia navoaka nandritra ny ampahefatry ny fahatelo taona písniPíseň manafintohina 2004.Informace nanoratra sy namokatra ny malaza R & B mpihira R. Kelly, izay mety ho re eo amin'ny vocals ny hira. Ny tonon'ilay hira dia naniry an'i Britney mba hosoratana eo aminy ary midika fa ny zavatra rehetra nataony dia maharikoriko.
Ny ahy dia singa faharoa mpihira Britney Spears avy amin'ny 5. studio album Blackout. Ny mpihira dia navoaka tamin'ny Janoary 2008.VideoklipVideo ho any amin'ilay hira dia voatifitra 27. ary 28. Novambra tao amin'ny Hollywood Nightclub Social Hollywood ary nandrakitra ny vidin'ny lahatsary 500 000 $. Ny talen'ny horonan-tsary dia Wayne Isham, niasa niaraka tamin'i Britney teo aloha, fa tsy zazavavy aho, fa mbola izaho sy ny vehivavy. Ny lahatsary dia manana seho voalohany amin'ny 14. Desambra amin'ny MTV.
Ny teny hoe Circus dia manana maro dikany: Circus (fahiny fanatanjahantena) - Roman sportovištěcirkus - mpifindrafindra monina fialam-boly podnikMoták (karazana) - Marsh, ny karazan-borona mpihaza ao amin'ny fianakaviana jestřábovitýchCircus - amin'ny teny Anglisy tanàna-joro manodidina tvaruOxford Circus - ny LondýněPiccadilly Circus - ny Londýněnázvy zavakanto dělCircus (Album Britney Spears) - Britney SpearsCircus rakikira (hira) - Britney hira SpearsPsycho Circus - Kiss Album ny taona 1998Circus Live - rakikira mozika John Cale ny teny 2007podobná
Gimme More dia pilina tokana monja avy amin'ny rakikira fahadimy tamin'ny Blackout avy amin'ny Britney Spears, navoaka tamin'ny volana septambra 2007. Singl dia namorona an'i Danja ary ilay mpihira faharoa nahomby indrindra Britney Spears avy amin'ilay hira ... Baby One More Time.
Izaho tsy ankizivavy, tsy mbola ary vehivavy, dia ny ampahatelon'ny Britney Spears navoakan'i Britney Spears. Navoaka tao amin'ny ampaha-telon'ny 2002 ilay hira.
Blackout no rakikira fahadimy nataon'ilay mpihira amerikanina Britney Spears. Navoakan'ny 29 ilay rakikira. Oktobra tany Eorôpa sy 30. October 2007 any Etazonia. Io no rakikirany studio voalohany izay ahitana fitaovana vaovao nanomboka tamin'ny album In The Zone tao amin'ny 2003.
Circus no rakitsary tantara fahitalavitra ny mpihira amerikanina Britney Spears. Niseho voalohany ny 28. Novambra 2008 tao amin'ny Jive Records, ny herinandro nankalazan'i Spears ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany. Ny rakikira dia singa iray avy amin'ny playlist lisitra Electropop sy Blackout. Ary nomena koa ny tsara fanombanana ny mozika mpitsikera, sy taorian'ny famotsorana azy dia nomena tamin'ny andro voalohany zana-takelaka 200 - Spears lasa tanora indrindra mpihira teo amin'ny tantara izay 5 rakikira no laharana voalohany tabilao, ka dia nisoratra anarana ho ao an-Guinness boky fitadidiana.
Femme Fatale no rakitsary fitoeran'ny mpihira Amerikana Britney Spears, navoaka tao amin'ny 25. March 2011. Ny rakikira Femme Fatale tonga an-tampon'ny sary, manao Britney Spears laharana niaraka Janet Jackson sy Mariah Carey, izay mpanakanto amin'ny avo indrindra isan'ny "isa ireo" Albums any Etazonia. Araka ireo mpitsidika ny tranokala MTV, i Femme Fatale no rakikira tsara indrindra amin'ny taona 2011.
Ny Circus starring: Britney Spears (matetika antsoina hoe fotsiny toy ny Circus Tour) no fahenina fampisehoana fitetezam-paritra, ny American Britney Spears mpihira. 2009 dia natao ho fanohanana ny rakitsariny fahenina, Circus. Nanomboka tamin'ny March 2009 ny fitsidihana, nandritra ny volana Martsa, 37 dia natao tany Etazonia sy Kanada. Ny tapany faharoa dia nandritra ny volana Jona sy Jolay 2009 ampiharina tany Eoropa (22 fampisehoana) tamin'ny Aogositra sy Septambra dia naorina 24 fampisehoana hafa any Etazonia sy Kanada. Ny concert ny 14 tany Aostralia dia vita tamin'ny novambra 2009. Izany no fahadimy mahasoa indrindra fitsidihana 2009, fitambaran'ny vola miditra Nahatratra 135 tapitrisa dolarů.Stalo fahenina eran'i Boligaria vavy lehibe indrindra teo amin'ny tantara mpanakanto. Ny fampisehoana tao amin'ny Madison Square Garden dia namidy nandritra ny segondra 8.
Ny Lucky no hira faharoa avy amin'ny birao faharoa an'i Britney Spears. Navoaka ny ampahatelon'ny 2000 ny hira. Navoakan'i Max Martin sy Rami indray ilay hira. Ny lahatsoratra dia momba ny mpilalao sarimihetsika iray izay toa faly noho izy manana vola, voninahitra, hatsaran-tarehy, saingy tena manirery tokoa izy.
Ny zazalahy no hiran'i Britney Spears farany avy amin'ny raki-drindrina fahatelo antsoina hoe Britney. Nafahana ny hira nandritra ny ampahefatry ny fahatelo taona 2002.Informace písniPíseň nosoratana sy novokarin'ny The Neptunes ary navoaka tamin'ny teny namboarin'i, mihira amin'ny Britney sy mpikambana ao amin'ny The Neptunes Pharrell Williams. Ny tononkira koa dia tao Austin Powers.
Ny voninahitra dia ny tahirin-tsarimihetsika naterin'ny Amerikana mpihira Britney Spears. Navoaka i 26. August of the year 2016 (RCA Records). Ny singa voalohany ao amin'ny album "Make Me ...", izay tao anatin'ny G-Eazy, dia efa nampidirin'ny 15. Jolay 2016. Ny rakikira ihany koa dia mivoaka amin'ny dika manokana izay ho ampiana hira dimy hafa.
Mahery kokoa ny hira faharoa avy ao amin'ny Oops album ... Nataoko indray ilay mpihira amerikanina Britney Spears. Ny hira dia navoaka nandritra ny telovolana faha-2000.Information momba ilay hira Ny hira dia nosoratana sy novokarin'ny mpitsara mpamorona an'io Amerikana Max Martin sy Rami io. Ity hira ity dia mihira momba ny fandresena ny krizy ao anatin'ny fifandraisana ary mihambo ho matanjaka kokoa noho ny teo aloha.
"Ooh La La" dia hira hira nataon'ny mpihira amerikanina Britney Spears. Ity hira ity dia nahitana ny sarimihetsika 2013 Smurf 2. Nosoratan'ny mpamoron-kira toa an'i Max Martin, niara-niasa tamin'i Britney tany am-boalohany. Na dia navoaka herinandro maromaro talohan'ny famoahana azy aza ny famoahana demo dia namoaka ny laharana voalohany ny 17. Jona 2013 tao amin'ny radio KIIS FM, izay nahitan'i Britney fanadihadiana tsy hiresaka afa-tsy amin'ny hira vaovao, fa momba ny rakitsary ho avy ary hetsika ao Las Vegas. Nivoaka i 11.7. 2013, ary tao anatin'ny roa andro dia mihoatra ny 7 ny fijery an-tapitrisany.
Britney dia ampahany fahatelo amin'ny mpihira Amerikana Britney Spears navoakan'i 6. Novambra 2001. Nisy hira vitsivitsy avy amin'ity rakikira ity dia niseho tao amin'ilay mpihira tamin'ny horonantsary antsoina hoe Crossroads. Nahomby ny volombolon'i Britney, saingy tsy nahatratra ny lazan'ireo albaney teo aloha izy ... Baby One More Time ary Oops! ... Nataoko izany indray.
... Ny Baby One More Time dia ilay hira voalohany nataon'ilay mpihira amerikanina pop Britney Spears izay namoaka azy avy amin'ny rakitsoratra voalohany mitondra ny anarana mitovy amin'ny ampahaefatry ny 1998.